Shop4Apps: mikatona ny fivarotana fampiharana Android Motorola any Amerika Latina | Androidsis
Shop4Apps: mikatona ny fivarotana app Android Motorola any Amerika Latina
Herintaona sisa iainany, hitsahatra tsy hiasa ao Amerika Latina ny fivarotana fangatahana an'ny orinasa Motorola ho an'ny fitaovana finday, Shop4Apps. Na izany aza, mba tsy hamelana ny mpampiasa azy dia nilaza ny orinasa fa miara-miasa amin'i Google izy "hahazoana antoka fa misy amin'ny Android Market ny rindranasa ankafizin'ny mpanjifa rehetra".
Mandritra izany fotoana izany, ireo mpampiasa fitaovana finday Motorola dia mbola manam-potoana misintona sy hamerenana rindrambaiko, satria hitohy amin'ny 19 aogositra ny serivisy.
Manolo-kevitra ny mpampiasa azy i Motorola mba hanao backup amin'ny fampiharana azy ireo hamerenana azy ireo amin'ny ho avy, raha ilaina izany. Ho an'ity tanjona ity, ny orinasa dia manome tutorial momba ny tranokalan'ny mpanohana azy.
Notokanana tamin'ny Jolay 4 ny fivarotana fampiharana finday Motorola's Shop2010Apps, ary misy rindranasa ho an'ny rafi-pitantanana finday Android voadika amin'ny teny Espaniôla. Tamin'izany fotoana izany, Motorola koa dia nanambara ny fisian'ny fampiharana manokana ho an'ity magazay ity, toy ny tambajotram-pivoriana "Where I'll been", ilay mpitarika divay "Wine Ph.D." ary ny serivisy "Instinctiv Player", izay mamela ny fividianana tapakila ho an'ny seho isan-karazany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Shop4Apps: mikatona ny fivarotana app Android Motorola any Amerika Latina
Tsy gaga amin'ilay fanidiana aho, Motorola dia nanararaotra matetika an'i Amerika Latina, lojika raha tsy mamaly azy ireo ny vahoaka.
Tohizo ny fahombiazan'ny Moto!
Tsy isalasalana fa ny fifaninanana (android) no nahatonga an'io, raha tsy mihetsika ho mpiray dina dia azo antoka fa hianjera….
Valio amin'i Santhiago
Miombon-kevitra amin'i Diego aho. Ny Motorola, toa ny orinasan-telefaona hafa (miantso azy hoe Samsung, LG, sns.) Dia mamindra hatrany an'i Amerika Latina amin'ny ambaratonga faharoa, nefa tsy tsapany akory ny lesoka ataon'izy ireo amin'izany, satria iray amin'ireo tsena mahomby indrindra izy io ary mitombo haingana kokoa. Amin'ity tranga manokana ity dia manana Motorola Milestone 2 aho ary mbola miandry ny fanavaozana ny Gingerbread. Enga anie ka hanomboka hanao «culpa» mifanaraka amin'izany i Motorola.
Samsung SGH-i927: Galaxy 2 misy kitendry QWERTY ara-batana
Fitsapana Samsung Galaxy S Wifi 5.0 (III)